बढैयातालका युवाहरुको छाडा पशु पालन गर्ने योजना - Butwal Online
बर्दिया २७ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको आवसरमा बढैयाताल गाउँ पालिका युवाहरुले छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएका छन ।
आज(सोमबार) एक भेलाको आयोजना गरी गाउँपालिका भित्र छाडिएका पशुहरुलाई एकठाउँमा राखेर उचित पालन सहितको योजना बनाएका हुन ।
छाडा पशु चौपायलाई पालन सहित आय आर्जन सहितको योजना बनाउने सुरुवाति कामको सुभारम्भ भएको स्थानिय बसन्त खड्काले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको भेलाले छाडा पशुुका कारण धेरै समस्या निम्तीएकाले निश्चिति ठाउँमा व्यवस्थित ढङले पालन गर्ने योजना सुनाएको थियो ।
कालिका गोबर्धन युवा कृषक समूह गढन गरेर स्थानिय युवाले छाडा पशु चौपाएको व्यवस्थापन गर्ने स्थानिय युवा सुशील पराजुलीले बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा गौतमले युवाले बनाएको योजना प्रशसनिय भएको भन्दै गाउँपालिकाले पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन ।
उपाध्यक्ष गौतमले सकारात्मक सोच राखेर काम गर्न अनुरोध गरिन । उनले छााछा पशुपालनको लागी चाहिने जग्गाको भाडा पालिकाले भाडामा लिइदिने , बार्षिक दश लाख बजेट दिने प्रतिवद्धता गरेकी थिइन ।
दिर्घकालिन सोच अनुरुप काम गर्दे अगाडि बढ्न युवाहरुलाई उपाध्यक्षले अनुरोध गरिन । छाडा पशुलाई पशु धन बनाऔ, कृषि उद्योगका रुपमा सन्चालन गरौ भन्ने मुल नारा सहित सुरु गरे अवस्य सम्भव हुने भेलामा सहभागि युवाहरुको जोड थियो ।
युवाहरुको भेलामा बक्ताका रुपमा बोल्दै कृषि पत्रकार सघं प्रदेश नम्बर ५ का उपाध्यक्ष खगेन्द्र दाहालले धेरै सोच विचार गरेर मात्र छाडा पशु व्यवस्थापनको काम सुरु गर्न अनुरोध गरे ।
कृषि पत्रकार दाहालले गाउँ पलिकाले दिने १० लाख र जमिनको भाडा रमकले पुग्छ कि पुग्दैन ? कति पशु पाल्न सकिन्छ ? भवन बनाउन , बार लगाउन , आहारा खुवाउन सकिन्छ कि सकिँदैन , बिरामी पशुको उपचार कसरि गर्ने, मृत्यु हुने पशुलाई कसरी व्यवस्थापन के गर्ने लगाएतका कुरालाई समाधान गर्ने दिर्घकालिन उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए ।